TAARIIKHDA MAANTA: | DAABACADA WARKA: Jan 28, 2003
Barnaamujka Caawa waxyaabaha an ku soo qadanayno waxaa kamid ah.
· Baaq ay ka soo saartay Jabhada wadaniga Xoreenta Ogaadeenya Dadkii uu Maamulka Qaqooyi Galbeed ka qabqabatay Magalada Hargaysa si ay gacanta ugu galiyan Xukuumada Itoobiya.
· Warkii oo ka kooban qodobadan hoose
· Suugaan iyo qodobo kale.
· Ciidamada Cadawga Iotoobiya oo wali sii wada Xadhigii iyo Cadaadiskii Shacbiga Ogaadeenya.
· Kumananun Ruux oo ku jira Xabsiyada Itoobiy oo Cuno joojin sameeyay.
· Ururka Xuquuqda Aadamaha u dooda ee Human Rights Watch oo Itobiya eedeen u soo jeediyay.
· Shirka dib u heshiisiinta Soomaalida uga socda Magaalada Eldoret oo loo rari doono meel kale.
· Wasiir Soomaali ah oo ka tirsan Dawlada Kenya oo ku dhintay shil Diyaaradeed.
Wararka ay noo soo tabinayaan wariyayaasha Radio Xoriyo ee Gobolada iyo Dagmooyinka Ogaadeenya ayaa sheegaya xadgudubyo iyo xadhig lagula kacay Shacbiga ogaadenya ee ku hoos nool gacanta Gumaysiga Itoobiya.
Ciidamada taliska Adis Ababa ee ku caanbaxay Dilka, Dhaca, Kufsiga, iyo Cadaadinta Shacbiga Ogaadeenya, ayaa wali sii wada falkoodii waxashnimo ee ay kula kacayeen Shacbiga Dulman ee Soomaalida Ogaadeenya.
Ciidamada Gumaysiga Itoobiya ayaa waxay ka gawraceen 15 Halaad oo dhashay oo uu lahaa nin Shacab ah oo lagu magacaabo Maxamed Yusuf Muxumed Suldaan. Geelan ayeey Ciidamada Gumaysiga Itoobiya ee caadeeystay Baabi,inta iyo Boobka hantida dadwaynaha ku Gawraceen Qoriile iyo Caado. Falkan yaabka leh ayaa aad uga xanaajiyay dawaynaha degaankaas una muujiyay cadaawada Ciidamada Itoobiya ay kula kacayaan. Ma aha markii u horeeysay ee Ciidamada Itoobiya Falkan oo kale ay ku kacaan iyaga oo horay deegaankaas ugu Gawracay Geel dhalay oo uu lahaa nin Shacb ah oo ku noolaa deegaanka Caado.
Dhanka kale waxay Ciidamada Xaqdarada ku Caaanbaxay ee Itoobiya Asseen Ceel dadka iyo duunyaduba ka cabi jireen oo ku yaala deegaanka Magaalada Goday. Ceelkaas oo lagu magacaabi jiray Horo-Shagax ayaa waxaa ka cabi jiray Xoolo lagu qiyasay ilaa 2500 oo Neef maalintiiba, Ceelkan ayeey Ciidamada Itoobiya Aaseen Xili Abaar lagu jiro oo dadka iyo duunyaduba Biyo aad ugu baahan yihiin.
Waraku waxay intaas ku darayaan in dadkii deegaankaas ay soo wajahday Biyo la,aan aaad u ba,an.
Ciidamada ka amar qaata Taliska TPLF ayaa Magaalada Diri-Dhaba ku xidhxidhay Mudo laga Joogo 4 Sano dad Shacab ah oo aan waxba galabsan. Dadkaas ayaa lasheegayaa in aan wax maxakamad ah la horkeenin mudadaas ay ku jiraan Xabsiyada Gumaysiga Itoobiya, taas oo muujinaysa in aan loo haynin wax danbi ah, balse ay u xidhan yihiin Awood sheegashada Taliska Adis Ababa oo kaliya.
Wararku waxay intaas ku darayaan in dadkaas lagula kacay fal ka baxsan Bini,aadanimada kadib markay Ciidamadu u gaysteen Jidhdil iyo falal kale oo xunxun.
Dadka xabsiyadaas ku jira mudada dheer ayaa waxaa ka mid ah
1- Ardo Shekh Khaliif.
2- Zahro sheekh Ahmed.
3- Hindo sheekh Mohamed.
4- Iyo kuwo kale oonaan magacooda si sax ah u wada haynin.
25/01/03 waxay Ciidamada Cadawga Itoobiya Magaalada Danood ku xidh xidheen Odoyashii deegaanka qaar ka mid ah. Odoyaashan ayaa la ogyahay inayna galin wax danbi ah, balse waxaa la rumaysan yahay in loo xidhay si dhaqaale looga uruursado.odoyaasha habka madaxfurashada loo haysto ayaa waxaa ka mid ah.
1- Xiirey Xirsi.
2- Yuusuf Xirsi
3- Xariir Yuusuf Taani.
4- Dhegacadde Biixi.
5- Sh.Cabdi Cisman Fidhin.
6- Daa,uud Xaashi
7- Maxamuud Cabdi Goosay. (Todobadas Oday ayeey Ciidamada Xaqdarada iyo Dulmiga la jooga Ogaadeenya ku xukumeen Ruuxiiba Lacag Madax Furasho ah oo dhan 4000- 4500 oo Bir.
8- Barkhadle Faarah Gaaciye.
9- Xassan Raage Saahid.
10- Xassan Sanwaddo.
11- Qambi Dige Yuusuf.
12- Maxamed Cadde Cabdulaahi, (Shantan Odayna waxay Ciidamada Nacabka Itoobiya Ruuxiiba ku Xukumeen Lacag Madax Furasho ah oo Dhan 2000- 4000 oo Bir.
sidoo kale Magaalada Qoriile waxaa lagu xidhxidhay Dadbadan oo Shacab ah wax danbi ahna aan Galin waxayna kala yihiin kuwan.
1- Ismaaciil Moxamed.
2- Cabdulaahi Maxamed Xussein.
3- Faadumo Ismaaciil.
4- Maxamed Faarah.
5- Maryan Wayrah.
6- Cabdi Kaydsane.
7- Muxumed Xaashi.
8- Xussein Cabdi Samad.
9- Cabdi-nuur Baynah.
10- Xirsi C/Raxmaan.
11- Ahmed Bashiir Muxumed.
12- Sugaal Sh. Muuse, (Dhamaan dadkan waxaa lagu ganaaxay Ruuxiiba 2000/ oo
12/01/03 waxay Ciidamada Cabudhiska Gumaysiga Itoobiya Xabsia Magaalada Goday u taxaabeen dadkan kala ah.
1- Cabdi Cismaan Caare.
2- Cadar Cismaan Caare.
3- Xaashi Maxamed.
4- Maxamuud Tubeec Cabdi.
5- Aden Habar waa.
6- Cabdi Aw Maxamuud,
Dadkan oo larumaysan yahay in ayna wax danbi ah lahayn ayay Ciidamada Itoobiya ku xukumeen Ruuxiiba Lacag Madax furasho ah oo dhan 2000 oo Bir.
12/01/03 Magaaalada Nusdariiqa, waxay Ciidamada Cadawga Itoobiya Xabsiga Dhigeen dakan kala ah.
1- Macruuf Shariif Cumar.
2- M/ed Shariif C/hi Kaafi.
3- M/ed Shariif Cabdi (indha-yare).
4- Cabdi-xakiim Shariif Xabiib.
Dadkaas Shacabka ah ee aan waxba galabsan ayeey Ciidamada Boobka ku caanbaxay ee Itoobiya ku xukumeen Ruuxiiba Lacag Madax furasho ah oo Dhan 2000 oo Bir ah.
4/01/03 waxay Ciidamada Gumaysiga Itoobiya Magaalada Gudhis ku xidh- xidheen dadkan Shacbka ah ee aan wax danbi ah leheeyn oo kal ah.
1- Saynabo Cabdi Duceeye.
2- Ahmed Maxamed Siyaad.
3- Xussein Sh. Xassan, wa.
4- Xussein Gama’diid C/Raxman
dadkan ayaa dhamaan ay ciidamada Itoobiya ku ganaaxeen Ruuxiiba 2000 oo Bir.
sidoo kale waxay Ciidamada Itoobiya Xabsiga magaalada Dhagax-Buur u taxaabeen dadkan kala ah.
1- Ladan Dacar.
2- Shamsa Cabdi Xaashi.
3- Quraysh Cabdi Siyaad.
4- Xabiiba Xassan Aw ismacil.
5- Ardo Cabdi Faarah.
Dadakan ayay Ciidamada Nacabka Gumaysiga Itoobiya ku Xukumeen Lacag madax furasho ah oo dhan Ruuxiiba 2000 oo Bir.
Ciidamada Itoobiya ayaa ilaa sanadkii dhamaaday dadwaynaha Ogaadeenya Xabsiyada uga Buuxiya si ay Dhaqaale uga uruursadaan.
kumanaan kun oo maxaabiis Itoobiyaan ah oo ka soo jeeda Qoomiyadaha Taliska Adis Ababa uu Gumaysto iyo kuwa uu cadaadiyo ayaa bilaabay Todobaadkan mudaharaad cuno diidid ah. Maxabiistaasi oo inta badan ku sugan xabsiga la yiraahdo Kerchele oo ku yaal Addis Ababa ayaa diiday in haba yaraate wax cuno ah ay cunaan iyaga oo isla markaasi diiday in ay hor istagaan maxkamadaha u adeega Taliska xaqdarada ku caanbaxay ee Itoobiya.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in u todobaadkii hore xabsiga Kerchele buuq ka bilowday iyada oo ay ku dhawacmeen dhowr Askari iyo Maxaabiis aad u badan. Waxaana la sheegayaa in hal Maxbuus u naftiisa ku waayey Rabshadahaas kadib markay Toogteen ilaalada Xabsigu. Maxabiista xabsiga Kerchelle oo tiradoodu gaarayso 2500 ayaa ku tilmaamay maxkamadaha Itoobiya kuwo aan Cadaalad ku dhisneen fuliyana Awaamiirta Taliska TPLF oo kaliya.
· Ururka Xuquuqda Aadamaha u dooda ee Human Rights Watch oo Itoobiya eedeen u soo jeediyay.
Ururka caalimiga ee u dooda xuquuqda adamaha ee loo yaqaano Human Rights Watch ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay in ay Itoobiya ka jirto cabudhis balaaran oo lagu hayo mutacalimiinta. Sida ku qoran warbixin Sanadeedka Ururka Human Rights Watch, waxyeelada ugu weyn oo dib u celinaya hor u marka Itoobiya waa cabudhiska Mutacalimiinta lagu hayo. Human Rights Watch oo saldhigeedu yahay Magaalada Washington ee Caasaimada wadanka maraykanka ayaa Xukuumada Itoobiya ugu baqday in ay joojiso guud ahaan Cabudhiska lagu hayo dadka ku hoos nool.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Eldoret ee dalka Kenya oo ah goobta ay ka socoto shirka dib u heshisiinta soomalida ayaa sheegayo in Ergeyda shirka loo rari doono goob kale. Go'aankan ayaa ah mid ay gaartay xukuumada cusub ee Kenya ka dib markay magacowday ergey cusub oo dowladda kenya iyo urur goboleedka IGAD u qaabishan shirka dib u heshisiinta soomalida Danjire kiblagat.Sida wararku sheegayaan waxaa shirka loo raari doonaa magaalada Ongata Rongai oo 20 kilometer u jirta magaalada Nairobi.
Allahu u naxariistee waxaa dalka kenya ku geeriyowday malinta jimcaha wasiirka shaqalaha iyo shaqaleeynta Kenya Xaaji Axmed Khaliif oo ku geeriyowday shil diyuuradeed. Sida ay wararku sheegayaan waxaa diyuuradaasi saarnaa 4 wasiir oo kale oo haatan ku wada jira isbitaal. Waxaa kale oo shilkaasi diyuurad ku dhintay Abdiqaadir Mahad Kuno, oo uu dhalay nin reer Garisa ah oo maal qabeen ah, waxaana adeer u ahaa wasiirkii hore ee xisbiga KANU mudane Huseen Macallin Maxamed. Allaha u naxariistee Marxuum Axmed Khaliif ayaa ahaa gudoomiyaha urur u dooda xuquuqda muslimiinta Kenya, sida wararku sheegayaana inta uusan diyuurada raacin waxuu salaad ku tukaday masaajid u dhow garoonka diyuuradaha iyada oo ay wasiirada kale sugayeen diyaarada gudaheeda. Marxuum Axmed Khaliif waxuu ahaa 53 jir, waxuuna ka yimid magaalada Wajeer.
· Baaq ku saabsan xasuuqii Hargeysa
Taarikhda-nololeedka dadyowga dunida waxaa ka mid ah marxalado ay la soo gudboonaato dhibaatooyin kala geddisan, sida gaajada, cudurada, colaado iyo gumeysi ummadi mid kale gumeysato.
Markay xeel dheerayaasha ku takhasusay dhaqan-dhaqaalaha bulshadu darseen waxa la xaqiijiyey inay ugu xun tahay dhibaatooyinka midda gumeysiga. Waxaa la ogaaday in dadka la gumeysto ayna ka baxsan karin cudurada bulshada ay ka mid yihiin, gaajada, jahliga, dagaal sokeeyaha iyo ku tumashada xuquuqda aasaasiga ah ee qofka aan xorta ahayn iwm.
Dhibaatooyinkaa kor ku xusan oo gumeysigu aabo u yahay waxay maanta haystaan shacabka Soomaalida Ogaadeenya, kamana bixi karaan inta ay gumeysi ku jiraan. Sababtaas ayaa keentay inay si kama dambeys ah hubka u qaataan si ay u soo celiyaan sharaftooda iyo qaranimadooda.
Iyaga oo u badheedhay dhib kasta oo ku soo gaadha jidka xorriyadda ayey filan-waa ku noqotay in gumeysiga Itoobiya adeegsado qaar ka mid ah walaalahooda Soomaali si ay uga qayb qaataan cadaadiska iyo jariimada uu ka gelayo xaq u dirirka dulman. Bisha January 20keedii 2003 ayaa dad masaakiin ah oo safar iyo ganacsato u badan laga qabqabtay magaalada Hargeysa si loogu dhiibo taliska dhiigya cabka ah ee Addis Ababa. Dadkaas tiradooda inta la ogyahay waxay gaadhayaan 57 qof. Talaabadan waxay ka dambeysay, sidii kuwii ka horeeyey, markay madaxda maamulka Hargeysa Booqasho ku tageen caasimad gumeysatada Itoobiya.
Masuuliyiinta magaalada Hargeysa markay tageen Addis Ababa waxaa la filayey inay kala hadlaan dhibaatada ay Itoobiya ku hayso shacabka Woqooyi Galbeed iyo cuna qabataynta ay ku soo rogeen ganacsiga ay la leeyihiin Ogaadeenya oo ah laf dhabarka dhaqaalaha gobolada Woqooyi Soomaaliya. Sida la ogsoon yahay waxay Gumeysatada Itoobiya xidhay bilihii ina soo dhaafay xadka u dhexeeya Ogaadeenya iyo Soomaaliya. Waxay la wareegtay baabuur iyo badeeeco badan oo shacabka Soomaali ee xadka labadiisa dhinac dhegan leeyihiin. Xasuuqa la xasuuqay ganacsatada aan waxba galabsanin waxay sii adkaynaysaa habsami u socodka ganacsiga Ogaadeenya iyo Woqooyiga Soomaaliya. Taasi waxay muujinaysaa in lagula soo taliyey inay dhinacooda ka xoojiyaan cunaqabataynta ganacsiga dadka ay isku sheegayaan inay madax u yihiin; waxayna ka soo horjeeddaa dareenka iyo doonista shacabka ay masuulka ka yihiin. Dawlad aan tixgelinin danta iyo doonista shacabkeeda ee aragtideeda gaaban ku socotana waa midda burburisay Qarankii Soomaali. Hadday maskax dawlado kale ku socdaana way ka sii xun tahay.
Waxay Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya ku baraarujinaysaa laba arrimood oo maamulka Woqooyi Galbeed ka indho iyo dhega l’a yahay:
Waxaa Geeska Afrika iyo adduunweynahaba ka jira halgan iyo dadaal is dabajoog ah sidii loo dhamays tiri lahaa dhibaatooyinka ah Gumeysiga Itoobiya walaalihiin gumeysato; dagaal sokeeyaha burburiyey Qaranimadii Soomaali; colaadda dawladaha dariska dhextaala iyo abaaraha ka dhashay dhibaatooyinkaas. Arrintaasi waa mid u baahan ka fikir iyo in si wada jir ah loo xaliyo iyada oon cidna la yaryaraysan. Nabad afarta garjaho colaad iyo dab kaga shidan yahay laguma tilmaamo mid waaraysa. Waxaa la qabtay heer caalami iyo mid gobolba shirar badan sidii loo soo celin lahaa midnimadii iyo qaranimadii Soomaaliyeed iyo nabad waarta. Shirarkaas waxaa ka qayb qaata dawladaha dariska ah, siyaasiyiinta iyo bulshada Soomaali qaybaheeda oo dhan oo aan ahayn idinka. Ka qayb qaadashadiina nabadaynta Geeska waxay noqotay falalkan safarada la xidh-xidhayo oo abuuraysa nacayb iyo colaad labada shacab ee walaalaha ah, taas oo ayna cid kale ka faa’iidaynin gumeysatada Itoobiya mooye. Waxaa dadaalka nabadaynta Geeska ka mid ah halganka shacabka Ogaadeenya ugu jiro aayo ka talintiisa. In gumeysiga raadkiisa la tirtiro waxay saldhig u tahay nabad waarta oo Geeska Afrika ka dhalata. Su’aashu waa halkay kaga jiraan masuuliyiinta Waqooyi Galbeed hawlahaas faraqyada badan? Ma mid shacabkooda aan khusayninbaa? .
Arrinta labaad ayna fahmin maamulka Woqooyi Galbeed waa halganka shacabka Ogaadeenya oo ah mid xaq ah. Waa halgan shacab walaalahood ay heeryada gumeysiga ku xoorayaan. Waa halgan maraya heerka aan ka soo laabasho lahayn. Mana ahayn inaad middaas fahmi waydaan maadaama aad tihiin masuuliyiinta shacabka aan walaalaha nahay. Gumeysatada Itoobiya waxaa lagu tiriyaa dalka Geeska ugu xoog badan. Waxay dishay dad boqol kun ka badan, waxay xidhay in ka sii badan oo weli xabisyada uga buuxa, waxay dhacday xoolo malaayiin ah, magaalooyin ayey gubtay. Arrintan waxshinamada ah waxay u sameynaysay inay burburiso halganka xaqa ah ee shacabka Ogaadeenya. Cadaadiskaa aan isaga oo kale dunida lagu arag waxay sii xoojisay mintidnimada iyo midnimada shacabka Ogaadeenya. Markii ay u taag wayday halganka shacabka ayey nafla haarkii idinla soo hoos gashay si aad uga qayb qaadataan jariimada ay ka gelayso xaq u dirirka iyo shacabka masaakiinta ah een wax galabsan.
Waxaan aaminsan nahay intaad ka qayb qaadanaysaan cadaadinta halganka xaqa ah ee shacabka Soomaalida Ogaadeenya waxaa idiinka haboon inaad ka qab qaadataan dadaalka soo celinta sharafta Soomaali iyo nabadaynta. Sida oo kale Addis Ababa laguma hayo dan Soomaali, intaad la tashanaysaan taliska Addis Ababa waxaa waajib idinku ah inaad la tashataan, walaalihiina Muqdusho.
Ugu dambayntii talaabo kasta oo ka soo horjeeda walaalnimada iyo nabad ku wada noolaansha labada shacab ee walaalaha waxay ku dambeyn fashil ciddii qaadana waxaa u dambeyn caaqibo xun, halganka gobonimadoonka Ogaadeenyana guusha kama dambaynta ah isaga ayaa leh.
Jabhada wadaniga Xoreenta Ogaadeenya.
Hogaanka Warfaafinta JWXO.